Hengxing akapinda muchikamu chema53 CHINA DZENYIKA DZAKANAKA EXPO
Iyo Exhibition ndiyo hombe runako inoratidzira muChina, muunganidzwa wemachini, kurongedza zvinhu, zvemunhu zvekuchengetedza zvigadzirwa, Nyanzvi yezvigadzirwa zverunako, makeup, Utano Hwehutano zvichingodaro. Iyo Hengxing michina yakanyatsogadzirirwa, ine yakanakisa nhanho yehunyanzvi, yepamusoro-kuita; akateedzana ultras ...
5 zvikonzero zvekusarudza chubhu kurongedza seyakakodzera mudziyo
ne admin pane 20-08-07
Mazuva ano, kusiyanisa kurongedza kwave kuchishandiswa muzvizoro. Uye kushandiswa kwekusvina machubhu kuri kukura zvakanyanya. Iko kutakurika uye kuchinjika kwakakuita icho chakakodzera mudziyo kusangana nezvinodiwa zvakasiyana. Shamwari yekushandisa Zvese zvaunoda kuti uite kupurika muvharo uye squeese, kutevedzera nekusunungura ...
Ultrasonic imwe yemhando yemuchina wave, iyo inoumbwa neyemagetsi magetsi system uye iyo ultrasonic vibration system. Iyo inodzosera simba remagetsi yeiyo yepamusoro frequency, yakakwira simba, iri kunze-kuiswa nesimba rekutyaira. Uye iwo akafananidzwa paramita se ...